Tani waa sida barnaamijka Samsung Dex uu uga shaqeeyo kombuyutarkaaga oo leh Galaxy Note 10 | Androidsis
Wax walba oo aad ku sameyn karto barnaamijka cusub ee Samsung Dex desktop iyo Galaxy Note 10
Dhowr maalmood ka hor Samsung ayaa soo saaray barnaamij cusub oo loogu magac daray Samsung Dex loogu talagalay Windows iyo macOS. Shaqadeedu waa inay Dex ka soo saarto kombuyutarkaaga ama laptop-kaaga sidaasna uga faa'iideysato astaamo taxane ah sida wareejinta faylka, nuqul qoraalka iyo astaamo kale oo badan.
Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa wax kasta oo aad ku qaban karto barnaamijkan Samsung desktop-ka cusub iyo tan wuxuu furaa adduunyo fursado adeegsadayaasha Galaxy Note 10. Waa inaan dhahnaa xilligan barnaamijkani wuxuu u gaar yahay Note 10, laakiin waxay noqon doontaa waqti kahor inta Samsung aysan u furin taleefanno badan oo Galaxy ah.
1 Sida loo rakibo loona qaabeeyo Samsung Dex
2 Ku wareeji faylasha inta udhaxeysa terminaalkaaga iyo laptop-kaaga
3 DeX ku hayso daaqad
4 Nuqul ka soo dheji kumbuyuutarkaaga oo ku dheji taleefankaaga
5 Si toos ah ugu dheji sawirrada barnaamijyada moobiilkaaga
6 Ciyaarta DeX
Sida loo rakibo loona qaabeeyo Samsung Dex
Samsung Dex waa waxaa loo heli karaa Windows 7 iyo Windows 10 labadaba, sida macOS:
Soo dejisanamsung Dex ee Windows/ loogu talagalay macOS
Markaad soo dejiso, waanu rakibnay waxayna bilaabi doontaa daqiiqada aan ku xirno Samsung Galaxy Note 10 XNUMX PC-gaaga markii ugu horeysay. Tani waa la qabtay, waan haysan doonnaa Dex daaqad miiska noo saaran inaad awood u yeelato inaad qabato waxyaabo badan oo aan hadda kuu sharixi doonno.
Soo koobid: waxaad kuheleysaa dhamaan shaashadda taleefankaaga shaashadda laptop-kaaga sida waa ogeysiisyo, dhammaan barnaamijyada iyo xitaa awooda lagu ciyaaro ciyaarihii aad soo iibsatay ama aad ku rakibtay terminal-kaaga.
Ku wareeji faylasha inta udhaxeysa terminaalkaaga iyo laptop-kaaga
Waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee barnaamijkan. Kuxiran fiilada USB, tan iyo waa isku xidhka keliya ee suurtogalka ah Waqtigan xaadirka ah Samsung DEX, waxaan ku wareejin karnaa faylasha si dhakhso leh.
Si fudud waa inaad u jiido fayl kasta oo aad ku haysato kombuyutarkaaga daaqada DeX iyo baarka horumarka ayaa bilaaban doona illaa dhammaadka. Waxaad sameyn kartaa isla sidaas adoo furaya barnaamijka "My files" si aad ugu wareejiso feylasha qaab fudud.
Sidan ayaad awoodid sawir ka qaad mobilkaaga, ugu wareeji laptop-kaaga si deg deg ah, ku tafatir Photoshop ka dibna ku wareeji taleefanka si aad ugu shubato shabakad kasta oo bulsheed. Waa mid ka mid ah tusaalooyinka waxtarka nidaamkan oo wax badan ka dhigaya wax fudud.
Haddii aad horey u haysatid laptop oo leh isku xirka USB Type-C, waad iloobi kartaa adapters-ka.
DeX ku hayso daaqad
Waxaan horey u soo sheegnay in DeX daaqad ku dhex leedahay ay tahay mid ka mid ah qodobadeeda ugu fiican. Waxaan ka furan karnaa dhammaan barnaamijyada moobilkeena, fiiri ogeysiisyada, maamul iyaga, samee emails iyo dhamaan fudaydka noqon kara trackpad-kaaga ama jiirkaas aad waligaa caadaysatay.
Daaqaddaas 'DeX' waa albaabka tooska ah ee Samsung Galaxy Note 10, sidaa darteed hubaal waxaad kahelaysaa faa iido weyn inaad iska iloobo terminaalka oo ka jawaab dhammaan fariimaha inta aad la shaqeyneyso laptop-kaaga.
Hadana haddii aan ku xisaabtano mahadsanid barnaamijkan desktop-ka ah waan awoodnaa iska ilow inaad sidato jiir iyo kiiboodh si aad ugu shaqeyso shaashadda shaashadda 'DeX', taasi waa, waxaan ubaahanahay kaliya laptop-keena, dhammaantood waa faa'iidooyin loogu talagalay qalab ka yimid albaabka dambe, laakiin taasi waxay siisaa waayo-aragnimo weyn oo isticmaale milkiilayaasha cusub ee Xusuusta 10.
Nuqul ka soo dheji kumbuyuutarkaaga oo ku dheji taleefankaaga
Si loo isticmaalo muuqaalkan in waxaa loola jeedaa in la haysto boodhadhka u dhexeeya terminalka iyo pc-ga, waxaan sameyn doonaa tan:
Laga soo bilaabo DeX waxaan fureynaa Samsung Notes.
Waxaan fureynaa qoraal cusub.
Waxaan nuqulaynaa qoraal aan hayno dukumeenti furan oo furan, tusaale ahaan.
Waxaan si toos ah ugu dhejinnaa qoraalka cusub ee Samsung Notes, iyo sixirka!
Si toos ah ugu dheji sawirrada barnaamijyada moobiilkaaga
Faa'iidada kale ayaa ah inaan awoodno ku dheji sawirrada barnaamijyada qaarkood mobilkaaga. Kaliya waa tusaale nooca faylasha ah ee aan marwalba ku dhejin karno iyadoo kuxiran barnaamij kasta.
Waxaan mar kale fureynaa Samsung Notes.
Hadda waxaan jiideynaa sawir aan ku heyno desktop-ka PC-ga qoraalkaas cusub.
Waxay si toos ah u dhejin doontaa
Si kale haddii loo dhigo, waxa aan qabaneyno waa inaan sawirro toos ah uga soo dhejino kombuyuutarradeena Samsung Samsung Notes Hadda qiyaasi barnaamijyada kale sida waraaqaha, Microsoft Word iyo inbadan. Fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn.
Iyada oo Samsung Dex ay ku xiran tahay shaashad, ciyaaruhu isku mid ma aha, laakiin barnaamijka desktop-ka wax walbaba way is beddelaan. Maaddaama aan ku furi karno ciyaaraha DeX shaashadda buuxda si aan ugu raaxaysanno cayaaraha aan ugu jecel nahay. Y ha u maleynin inay gaabin doonto, haba yaraatee, sida inaad ku ciyaareyso PC-gaaga.
Waxaan fureynaa barnaamijyada waxaanan bilaabaynaa ciyaar kasta.
Waxay ku furi doontaa indhahayaga hortooda.
Ikhtiyaarka shaashadda oo dhammaystiran waa la cawli doonaa.
Guji iyada oo noo oggolaan doonta inaan aadno ikhtiyaarka aan ku khasbeyno shaashadda dhameystiran isla
Waxaan ciyaari doonaa kulankeena gabi ahaanba si aan ugu raaxeysano.
Kuwani waa qaar ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee Samsung DeX Taasina waxay noqoneysaa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee aad ku heli karto Galaxy Note 10.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Wax walba oo aad ku sameyn karto barnaamijka cusub ee Samsung Dex desktop iyo Galaxy Note 10
Waad salaaman tahay, markii aan faylalka ka soo jiido PC-ga ee taleefanka, aniga way ii shaqeysaa, laakiin barnaamijka 'My files to pc' ma awoodo, waxaanan ku arkaa maqaalka inaad faallo ka bixineyso inaad feylasha taleefanka ugu wareejiso barnaamijka Dex, waxaa loo sameeyaa sidan.
Waa run, hadda ma oggolaanayso inay ka gudubto Samsung Dex. Uhm, waxaan u maleynayaa inuu iga tagey maalintiisii… waa inay cusbooneysiiyaan ama wax uun.
Haddii aad awoodid, waa inaad gujisaa riixista oo ka dheereysa inta caadiga ah, gacan yar ayaa muuqata oo waad jiidi kartaa faylka.
Ku jawaab Alvaro García
Kuwani waa qeexitaannada horay loo muujiyay ee Maamuuska 8S Pro